Wada-tashiyadii beelaha Soomaalida ee dhismaha golaha wasiirada cusub oo lasoo gaba-gabeeyay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wada-tashiyadii beelaha Soomaalida ee dhismaha golaha wasiirada cusub oo lasoo gaba-gabeeyay
Waxaa habeenkii xalay lasoo gaba-gabeeyay wada-tashiyadii dhismaha golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya, kadib kulamo kala duwan oo ka kala dhacay xafiisyada madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Kulamadaasi oo ahaa mid xilliyadii ugu dambeysay ka socday xarunta madaxtooyadda Soomaaliya ayaa waxaa diiradda lagu saarayay sidii beelaha ka mid noqonaya golaha wasiirada ay u qeybsan lahaayeen, islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan loogu dhawaaqi lahaa.
Madaxweyne Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay musharixiinta doonaya inay ka mid noqdaaan wasiirada cusub ee Soomaaliya ayaa ku wargeliyay musharixiintaasi in sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo gudbiyaan taariikh nololeedkooda (CV) ama ay geeyaan xafiiska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Musharixiintaasi oo aad u badan ayaa durbadiiba bilaabay inay CV-yadooda soo gudbistaan, wuxuuna ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre sidoo kale kulamo kooxeed iyo kuwo shaqsiyeed la yeeshay xildhibaanada isku beesha ah iyo musharixiinta doonaya inay ka mid noqdaan golaha wasiirada.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa haatan u muuqda mid doonayo inuu golahiisa wasiiro kusoo dhiso mid kalsooni beeleed ku dhisan, si aysan caqabad uga imaan ansixintooda.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay oo musharixiin intaan la eg ay codsiyadooda soo gudbistaan, iyadoona hore loo arki jiray oo kaliya in musharixiin yar ay si kala duwan codsiyadooda usoo gudbistaan.